Guurka Minnesota | LawHelp Minnesota
Guurka Minnesota (PDF)379.91 KB
Furiinka: Hagaha Aasaasiga Ah Ee Sharciga Minnesota
Sidee ayaan ugu guursan karaa Minnesota?
Si aad si sharci ah ugu guursato Minnesota waa in aad codsataa ogolaashaha(leesinka) guurka waana in uu guurka sameeyaa qof u heysta ogolaasho sharci ah. Ka dib waxaa lagu siinayaa shahaadada guurka oo cadeyneysa in aad si sharci ah isu qabtaan.
Tan iyo 2015 waxaa Mareykanka la ogolaaday in dadka isku jinsiga ah is guursan karaan.
Ma waxa aad tahay qof xaas ah ama aan heysan warqadaha sharciga ah ee wadanka? Waxaa lagaa doonayaa in aad ogaato waxyaabo kale. Akhri xogta urursan ee Dadka soo Haajira, Guurka iyo Furiinka ee Minnesota (Immigrants, Marriage and Divorce in Minnesota) and Dadka Soo Haajira ee Aan heysan Sharci Ma Isku Guursan Karaan Minnesota (Can Undocumented Immigrants Marry in Minnesota?
Waa maxay da’da shargigu ogol yahay in lagu guursan karo Minnesota?
Waa in ay da’daadu tahay 18 jir oo aad go’aan isu gaari karto.
Haddii ay da’daadu tahay 16 ama ka weyn, waad guudsan kartaa haddii uu waalidka ama mas’uulku ogolaado. Waa in aad sheegtaa magaca waalidkaa iyo cinwaankooda marka aad codsaneyso ogolaashaha (leesinka).
Waa maxay guurka aan la ogoleyn Minnesota?
Haddii aad dooneyso in aad guursato waa in aadan qof kale xaas/say aadan u aheyn.
Haddii aad horay u guursatay waa in aad heysataa furiin sharci ah oo xaaskii/saygii hore. Furiin sharci ah waa midka la raaco sharciyada gobolka halka uu ka dhacayo furiinka oo qaali uu saxiixaa ka hor inta aanu noqon mid sharci ah. Gobolka Minnesota, furiinku waa inuu ka soo baxaa maxkamadda oo qaali saxiixaa ka hor inta aanu noqon furiin sharci ah.
Minnesota lama ogola dadka ehelka isu ah qaarkood in ay is guursadaaan: Ma guursan kartid:
- Ilmaha aad dhashay ama aad korsatay.
- Ilmaha ay dhaleen ilmo aad dhashay ama aad korsatay.
- Ilmaha ay dhaleen walaalahaa haddii ay yihiin kuwo aad wada dhalateen.
- Ilmo adeerka/abtiga koowaad Ilma adeerka/abtiga koowaad waa caruurta ay dhaleen eedooyinka ama adeerada wada dhashay.
Halkee ayaan ka codsan karaa ogolaashaha?
Si aad ugu guursato Minnesota waxa aad codsaneysaa ogolaashaha. Leesinka waxa aad ka codsan kartaa degmo kasta. Waajib kuguma aha in aad codsato degmada aad dooneyso in aad u guursato. Maadaama ay degmooyinku kala duwan yihiin, la xiriir xaarunta ogolaashaha ee degaanka si aad u ogaato halka aad ka codsaneyso. Weydii haddii degmada aad degan tahay ay ku siin karaan macluumaad guud oo ku saabsan ama ka raadso internetka xarunta leesinada ee degaanka si aad u ogaato.
Degmooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad foomamka ka daabacan karto barta internetka. Qaarkoodna waxa aad codsiga ku soo gudbin kartaa barta internetka. Booqo bogga internka ee degmada.
Waa in aad si wadajir ah u codsataan ogolaashaha guurka (leesinka) Haddii ay dhacdo in aydan wada tagi karin, weydii xarunta leesinada waxyaabaha lagaa doonayo si aad u codsataan leesinka.
Waa imisa qiimaha ogolaashaha guurka?
Codsiga leesinka guurka waa $115. Haddii aad qaadato ugu yaraan 12 saacadood oo fasal guurka ka hor ah, lacagta leesinka waa $40. Waa in aad fasalka ka qaadataa:
Kaniisad ama hay’ad u heysata ogolaasho.
Qof ogolaasho u heysta inuu samyn karo guurka madaniga ah.
Qof ogolaasho u heysta la talinta guurka iyo qoyska.
Kala tasho sheekha ama ka raadso barta internetka la taliyaha qoyska. Weydii qiimaha ka hor inta aadan iska diiwaan gelin.
Waxaa lagaa doonayaa cadeyn in aad fasalka qaadatay. Qofkabixinaya fasalka waa inuu hayaa foomamka muhimka ah ama erayada cadeynaya in aad fasalka qaadatay. Foomka ama warqadda waa in la soo mariyaa nootaayada. Horey u soo qaado marka aad codsaneyso ogolaashaha (leesinka).
Waa maxay macluumaadka aan u baahanahay si aan u codsado ogolaashaha guurka
Jinsiga (rag iyo dumar)
Aqoonsi sawir leh (leesinka wadida gawaarida, kaarka aqoonsiga gobolka, baasaboor)
Haddii aad dooneyso in aad magacaaga bedesho guurka ka dib, magaca aad dooneyso in aad la baxdo.
Haddii aad horey u guursatay waxaa lagaa doonayaa magaca xaakaagii/saygaagii hore, meesha iyo taariikhda aad isku guursateen, ama hadii xaaska/saygii hore geeriyooday, taariikhda uu geeriyooday.
Xiriirka idinka dhexeeye haddii uu jiro wada dhalasho ama koritaan.
Haddii aad horey uga gashay dambi culus mid ka mid ah gobolada oo aad dooneyso in aad magacaaga bedesho, wargeli in aad gaarsiiso xafiiska xeer ilaalinta degmada aad dooneyso in aad magacaaga bedesho. Buuxi codsi una soo dir nuqul ka mid ah xafiiska xeer ilaalinta degmada maxkamadda lagugu saaray oo lagugu helay dambiyada U dir 30 maalmood ka hor inta aadan codsiga u soo gudbin degmada si aad u codsato leesinka guurka.
Xeer ilaalinta degmadu waxa ay heysataa 30 maalmood oo ay ku diidaan magac bedelashada. Marka aad codsato magac bedeleshada waa in aad maxkamadda u cadeysaa in aad gaarsiisay xafiiska xeer ilaalinta oo adeegsanaya cadeynta gaarsiinta.
Lagaama doonayo in aad muddo sugto si aad u hesho ogolaashaha guurka.
Hadii aad rabtid inaad bedesho qaar ama dhamaan magacyadaadda oo dhan, waa aad ku sameyn kartaa taa codsigaaga warqada nikaaxa. Haddii aad go’aansato inaad sameyso magac bedelid ka dib kolka aad guursato, taa waxa aad ka sameyn kartaa uun maxkamadaha.
Haddii lagaaga helay dambi weyn ee kabaa’ir ah (felony) gobol wadanka ka mid ah aadna doonayso inaad bedesho magacaaga kolka aad guursato, waxaa jira foom kale oo siyaado ah oo aad u baahan tahay inaad sameyso ka hor inaadan helin warqada nikaaxa. Ka hubi xeer-ilaaliyaha degmadda habka iyo sida lagu helo foomka. Xeer-ilaaliyaha degmaddu waxa uu haystaa 30-cisho oo uu uga mudici karo magac bedelidaada. Kolkaa, hubi inaad arintan sameyso 30-cisho ka hor kolka aad qorshaynayso inaad codsiga warqada nikaaxa aad geyso degmadda.
Muddo intee le’eg ayaan sugi helida warqada nixkaada?
Ma jiraan hadda wixii ka dambeeya muddo ay tahay in la sugo warqada nikaaxa. Badanaa, waxa aad qabsan balanta aad ku tagto xafiiska warqada guurka ka dibna waqtiga balanta ayaa lagu siin warqada nikaaxa.
Marka aan helo ogolaashaha, waqti intee le’eg ayaan heystaa si aan u guursado?
Waxa aad heysataa 6 bilood ka bilaabata taariikhda ogolaashaha guurka in aad ku guursato. Haddii aadan ku guursan 6 bilood gudahood, waa in aad dib u codsataa.
Haddii aadan ku guursan 6 bilood gudahood xanuun dartii ama dhibaato weyn oo dhacday, waxaa laga yaabaa in lacagta lagaa daayo. Weydii xafiiska degmada.
Yaa isu kaaya guurin kara?
Ka dib marka aad hesho ogolaashaha, waxa isu kiin guuri kara dadka hoos ku xusan oo da’doodu ka weyn tahay 21 OO ah
Qaali, oo uu ku jiro qaali ka fariistay shaqada.
Maamulaha maxkamadda oo ay ka mid yihiin maamulaha maxkamadda ee shaqada ka friistay ka dib marka uu ogolaado madaxa qaaliyada ee degmada.
Maamule sare oo maxkamadda ah oo u shaqaale ka ah nidaamka maxkamadaha ama uu madaxa qaaliyada amray inuu ka fulin karo isu gurinta degaanka maxkamadda.
Maamule Sare oo la shaqeeya Maamulka Waxbarashada ee Minnesota ee Dadka Dhagaha iyo Maqalka la’a (Minnesota State Academy for Deaf and Blind).
Sheekh ka tirsan diinta aad aaminsan tahay oo heysta ogolaashaha.
Haddii aad dooneyso in ay isu kiin guuriyaan saraakisha maxkamadda (qaali), la xiriir degmada si aad u heshaan macluumaad arrintaas ku saabsan. Waxa aad ka heli kartaa halka aad kala xiriireyso degmo kasta www.mncourts.gov. Guji “Find Courts (raadi degmada)” oo ka dooro degmadaada.
Xagee ayaa xafladda lagu qabanayaa?
Haddii aad ogolaashaha ka codsatay Minnesota, xafladda guurka waa in lagu qabtaa Minnesota.
Ma jiraan nidaam oo degsan oo la raaco xafladda guurka?
Marka laga reebo in qof sharci u heysta uu fuliyo isu guurinta, waa in ay 2 qof oo markhaati ah goobjoog ka ahaadaan. Goob joogayaasha waa in da’doodu ka weyn tahay 16 sano jir. Waa in ay saxiixaan shahaadada si ay uga marag kacaan in ay goobjoog ka ahaayeen.
Haddii uu xafladda qabtay qof xagga diinta ka socda, xafladda waa in loo qabtaa hab waafaqsan sida ay diintaadu qabto.
Haddii uu xafladda qabto qaali, maamulaha maxkamadda, ama dad kale oo aan aheyn wadaadada diinta, waa in aad cadeysaa in qofka aad u noqoneyso xaas, say ama dad wada nool xilli ka mid ah inta ay xafladdu socoto.
Maxaa dhacaya xafladda ka dib?
Xafladda ka dib, qofka xafladda qabtay waxaa laga doonayaa inuu muddo 5 cisho ah shahaadada ugu soo diro degmada aad ka codsatay ogolaashaha. Degmada ayaa diiwaangelisa guurka oo kuu soo dirta shahaadada guurka ee leh shaaabadda degmada.
Haddii aad magacaaga bedeshay, waa in aad saxdaa dhamaan diiwaanka uu ku qoran yahay magacaagii hore. Taas waxaa ka mid ah in aad codsato kaarka lambarka bulshada, bangiyada, goobta shaqada, leesinka wadida gaadiidka ama aqoonsiga gobolka. Waa in aad la xiriirtaa mid kasta oo ka mid ah xafiisyada si aad u ogaato waxa lagaa doonayo.